Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume nomuntu. Lawa mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu ngenkathi ephakathi kwabo ukuba bawezwe, wabahola, wabehlulela, wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikona, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngomuntu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu kubantu kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe ukuba azibonakalise aphinde azwakalise izwi lakhe kubantu ngamazwi.
UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela nokuhlanza abantu kanye nokuholela abantu enkathini entsha, Inkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso Wakhe bajabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukela izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.
UKristu wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, usekhulume amazwi, enika ubufakazi bokuthi Umsindisi wabuya kudala phezu “kwefu elimhlophe” futhi usenze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu ukuze ahlulele, ahlanze, futhi asindise isintu. UNkulunkulu uSomandla iWundlu elaprofethwa yiNcwadi yesAmbulo evula umqulu kanye nezimpawu eziyisikhombisa.
UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, ukhulume amazwi ukuze ahlulele, ahlanze futhi asindise abantu, futhi wenze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu. UNkulunkulu uSomandla uvele eMpumalanga yomhlaba ngokulunga, ubukhosi, ulaka, kanye nokusola, futhi uzembule ezihlweleni eziningi zabantu! Lokhu kugcwalisa lokho okubhalwe eBhayibhelini: “Isikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu sesifikile.”
Le ncwadi ikhombisa ingqikithi yomuntu nesimo sanamuhla somuntu, ibeka ngokusobala okufanele abantu basebenzele ukukuthola, bese ixazulula izinkinga eziphathelene nemvelo yesintu.
Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)
Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.
Okuqoqelwe kule ncwadi ngamaqiniso akhanyisayo ezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, nendlela yokwahlukanisa phakathi kwezindlela zangempela nezindlela ezingamanga, ukuze afundwe futhi kuhlonywe ngawo yilabo abasanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, nokuba babeke izisekelo ngokushesha ngokungenzeka phezu kwamaqiniso akhanyisayo omsebenzi kaNkulunkulu.
Uma sicula amaculo amasha okudumisa uNkulunkulu, siyakwazi ukuzizwela ukuthi siyiqembu labantu abalandela iWundlu bese sicula amaculo aphrofethwa eNcwadini yeSambulo. Sizizwela ngokwangempela ukuthi sibusisekile kakhulu ukuba siphakanyiselwe esihlalweni sikaNkulunkulu sase sihambela idili lomshado weWundlu.
UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu eba yinyama nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina njll. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.
Amazwi kaNkulunkulu uSomandla – uKristu wezinsuku zokugcina nokubuya kukaJesu – ethula ubufakazi ngokuvela nangomsebenzi kaNkulunkulu bese embula izimfihlakalo zohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lokusindisa kwaKhe isintu. Kule ncwadi, kukhethwe iziqephu emaqinisweni ashiwo nguKristu wezinsuku zokugcina, ukuze kuxazululwe imibuzo ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina zabantu bazo zonke izinkolo nalabo abomele futhi befuna indlela eyiqiniso, ivumela abantu ukuthi babone ukuthi amazwi aKhe ayiqiniso, indlela, nokuphila.
Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uSomandla ukhulise umsebenzi Wakhe wokwahlulela wezinsuku zokugcina ezwekazini laseChina, nakuba abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu bedlule ekushushisweni okunobulwane, okunesihluku nguhulumeni waseChina, abanqobeki futhi bethembeke ngokunganciphi ngaphansi kokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu, bakha ubufakazi obunamandla bokunqoba uSathane. Amaqiniso akhombisa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uSomandla ngempela wenze iqembu labanqobi eNkathini Yombuso, efeza uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.
Ukwahlulelwa ngaphambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu kwezinsuku zokugcina sekuqalile! Ekugcineni uKristu—uNkulunkulu uSomandla—uye wabonakalisa iqiniso lokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza isintu. Ngokwambulwa nangokwahlulelwa yizwi likaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe baya bebona iqiniso lokonaliswa kwabo uSathane futhi bathola indlela yokuphunyula ethonyeni likaSathane, ebasiza nasesimweni sokuphila kwabo ukuthi siye ngokuguquka kancane kancane. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangempela kufakazela ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa uNkulunkulu uSomandla wumsebenzi wokusindisa isintu ngempela.
Wonke umuntu okholwa kuNkulunkulu bese ebuyela Kuye uhamba indlela yenhliziyo emangalisayo, futhi okuhlangenwe nakho komuntu ngamunye akufani. Le ncwadi iyiqoqo lokuhlangenwe nakho kwangempela kwabantu abakhethwe nguNkulunkulu ababuyela kuNkulunkulu uSomandla. Lokhu okuhlangenwe nakho kulandiswa ngabantu abakhethwe nguNkulunkulu abalahla imibono yabo yenkolo nemigoqo yabo ngaphansi kokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu uSomandla, bese bekhululeka emandleni omphiki-kristu wenkolo nasekuphazamiseni kanye nasekuphoqeleleni kwamandla obusathane eCCP. Balandisa futhi ngezinkambo zabo ezishukumisayo lokuzuza ukuqiniseka okuphelele ngendlela eyiqiniso yokubuyela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu phakathi kwezimpi zabo zomoya. Lezi zimpi zomoya ezinzima zigqamisa ububi nokukhohlakala kukaSathane, futhi zigqamisa kakhulu igunya namandla amazwi kaNkulunku. Bonke labo abakholwa kuNkulunkulu ngokweqiniso bazobuyela ngempela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu!
Dawuniloda PDF Dawuniloda epub Dawuniloda TXT UTF8 Dawuniloda TXT GBK